कसरी बनाउने चाकु ? के कस्ता छन् यसका फाइदा ? – BikashNews
कसरी बनाउने चाकु ? के कस्ता छन् यसका फाइदा ?
२०७६ पुष २९ गते १९:५५ विकासन्युज
काठमाडौं । हिन्दुहरुको प्रमुख चाडमध्ये माघे संक्रान्ति पनि महत्वपूर्ण पर्व हो । परम्परादेखि मानी आएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको यो संक्रान्तिलाई मकर संक्रान्तिको रुपमा पनि चिनिन्छ ।
माघे संक्रान्तिमा विशेष गरेर घ्यू चाकु, तिलको लड्डू, फापरको फुरौला, तरुल, सखरखण्ड जस्ता खाद्यपदार्थ खाने प्रचलन छ । माघे संक्रान्तिको आसपासमा यस्ता खाद्यपरिकार विक्री वितरणको लागि पर्याप्त मात्रामा राखिएका पनि हुन्छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार व्यवसायिक चाकु उत्पादन गर्ने संस्था विभागमा दर्ता भएका छैनन् । यसैकारण यस्ता खाद्य पदार्थको गुणस्तरमा यकिन हुन सकिने अवस्था भने छैन । तर, परम्परादेखि उत्पादन गरिदै आएको खाद्य पदार्थ भएकोले गुणस्तरहीन हुन्छन् भनेर आरोप लगाइहाल्न मिल्ने अवस्था पनि छैन ।
गुलियो तथा अमिलो खाद्य पदार्थ आफैमा सुरक्षित खाद्यपदार्थ भएकाले यसको विग्रिने सम्भावना अति हुन्छ । सखर तथा चिनीलाई पकाएर बनाउने चाकुको गुणस्तरमा विभागले हालसम्म बजारमा अनुगम गरेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा धेरै चाकु उत्पादन हुने स्थान टोखा हो । टोखामा माघे संक्रान्तिताका धेरै परिमाणमा चाकु उत्पादन हुने गर्छ । घरमा नै बनाउने आफ्नै प्रक्रिया भएकोले पनि यसको विश्वनियता बढ्दै गएको छ र पछिल्लो समय चाकुलाई नेपाली चक्लेटको रुपमा ब्राण्डिङ गर्ने प्रयास पनि भएको छ ।
बजारमा माघे संक्रान्ति तथा नेवारहरुको यमुरी पूर्णिमाको दिन चाकुको प्रयोग धेरै हुने भएपनि हालसम्म कुनै गुनासो नआएको विभागको भनाइ छ ।
चाकु बनाउने तरिका
पानीमा सखर राखेर आगोमा लामो समयसम्म पकाउने, उक्त पानी र सखर पाकेसँगै ठूलो खुल्ला भाँडोमा राख्ने । तातो सेलाएसँगै त्यसलाई रंग परिवर्तन नहुँदासम्म फिट्ने । त्यसपछि आफूलाई चाहिने मात्रामा किसकिस, काजु, नरिवल मिसाएर केही समय खुल्ला छोड्ने । यस्तै, घरेलु तरिकाले आफूले चाहेअनुसारको आकारमा चाकु तयार गर्न सकिन्छ ।
यस्ता छन् चाकुको फाइदा
गुलियो खाद्यवस्तुले शरिरलाई शक्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । जाडो मौसममा थकित शरिरलाई सन्तुलन गर्ने काम गुलियो खाद्यान्नभित्र पाइन्छ । चिसोबाट थाकेको शरिरलाई न्यायो हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ चाकु, घ्यू, तरुल, तिल, सक्खरखण्ड जस्ता खाद्यपदार्थलाई प्रसादको स्वरुप लिने गरिँदै आएको छ । सखर र पानीबाट बन्ने चाकुमा कार्बाेहाइड्रेड प्रशस्त मात्रामा हुन्छ ।
त्यस्तै, चाकुमा हुने कालो पदार्थमा अधिक मात्रामा आइरन पाइने हुँदा कमजोर शरिर तथा रक्तअल्पता भएका विरामीको लागि यसले धेरै फाइदा गर्छ ।
शरिरलाई ताप प्रदान गर्नका लागि घ्यू सन्तुलित मात्रामा प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ । जाडोयाममा शरिरलाई अधिक मात्रामा उर्जा आवश्यक पर्ने हुँदा घ्यू र चाकु प्रयोग गरिएको हो ।